ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links ၄
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links ၄
အလွမ်းများနဲ့ ဧရာဝတီဇတ်ကား ဂျပန်လူမျိုးများပါ စိတ်...
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ယုန်...
ဆရာစံတဲ့ဟေ့...ဒို့ များရဲ့ အာဇာနည်
ကြီးလေချာလေ.. ကြီးလေ မိုက်လေတဲ့ ခိုးစားတတ်တဲ့ ကျီး...
ကောင်မလေးတွေသာ ချွတ်တာမဟုတ်ဖူး..သူတို့ လည်း ကျွတ်က...
လေးစားထိုက်ပါသည်။ ရွက်ပုန်းသီး အာဇာနည် စစ်သည်များ
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေပွဲ
သူတို့ ကျ တယ်ဟုတ်နေပါလား...
နိူင်ငံခြားသားကျ ဖင်တုန်အောင်ကြောက်တာ နအဖ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သံဃာ့ရုံးခန်း (ဂျပန်ဌာနခွဲ)တွင် န...
ညောင်မြစ်တူးမိလို့ပေါ်ရတဲ့ ပုတ်သင်ညိုဥ (ဘယ်သူများ...
လင်္ကာတမန်မဂ္ဂဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
New perspective of Myanmar ( plastic Problem)
နတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့မြန်မာပြည်
UNICEF: Tsunami 5: Myanmar battles repeat disaster...
အာဇာနည် ဘလော့ခ်မှ ပြည်တွင်းရှိ ညီအစ်ကို များအတွက် ...
မြန်မာတို့ရဲ့ ရွေမြန်မာ (ကောင်းလိုက်တဲ့ အစိုးရ အလွ...
ဇီးစေ့နဲ့ပေါက်ခံရတောင် မြင့်မိုရ်တောင်က မပြိုနို...
၀တို့ဘိန်းတိုးချဲ့စိုက်နေရသော အကြောင်းရင်း..
ဗုဒ္ဓေါဝါဒကျောင်းဖွင့်ပွဲနှင့် ကျောင်းရေစက်ချပွဲ ဖိ...
နာဇီ ဆရာဝန်တွေလိုဘဲ လက်စွမ်းထက်သော မြန်မာ အထူးကုဆရ...
AAPP(Burma) ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဖြူမလား မဲမလား..ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ..
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ၂၀၀၉ သတင်းများ
ဒါ အောင်ဆန်း သားကွ...
လေယာဉ်စုတ်တွေ အသစ်ဈေးနဲ့ ရောင်းမယ်..
ပြောပြန်ရင်လည်း စိန်ဝင်း လွန်ရာကျဦးမယ်..
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား သုံးသပ်ချက်
အင်တာနက် သီချင်းဆိုတိုင်း ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖွင့်မကြည့်...
ရန်ကုန်က အမြင်မတော်စရာ နိုင်ငံခြားသူ
Credit Suisse to pay $536 mn to US for bursting sa...
နိင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်သော သားသမီးများကို နှိုင်းယှဥ...
ဖြူဖြူကျော်သိန်း တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖ...
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ၏ ၃၀ . ၁၂. ၂၀၀၉ အထွေထွေသပိတ်ဆင်နွှ...
ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ လူနာငြင်းပယ်မှုများ ရှိလာ
ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများတွင် အချိန်ပိုင်း/အချိန်...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ၄၈ နှ...
ဗိုလိချုပ်ပြောတဲ့ ဖာနိုင်ငံကို တပ်မတော်မှ အကောင်အထ...
နိင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်၏ သားသမီးများကို နှိုင်းယှဉ်ြ...
အမှန်ကို ၀န်မခံရဲတဲ့ စစ်သား
ယခုနှစ် လျှပ်တပြက် နာမည်ကြီးသူ ဆယ်ဦးတွင် ယက်ထော ပ...
ထိန်းသိမ်းခံ ညီညီအောင်ကိစ္စ ၀န်ကြီး ကလင်တန် ကြားဝင်...
MIAMI 2009 Recap
၈၈၈၈ ပြည်သူ့သတင်းစဉ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၆၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂...
ကျမတော်တော်ညံ့ခဲ့ပါတယ် (ဟောပြောသူ- ဂျူး)
FREE NYI NYI AUNG ( KYAW ZAW LWIN ) NOW!
နအဖ၏ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါး
အာဇာနည် သူရဲကောင်း ကိုတင်မောင်ဦး
သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် နဲ့ စ၀်ဒေ၀ီ သြစတြီးယားသ...
KNU နှင့် နအဖ တိုက်ပွဲသတင်း
ပိဋကတ်ရွတ်ဆိုပွဲ (International Tipitaka Chatting)...
Generation wave (မျုိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး)...
မေမေ မမြင်ဖူးရသေးတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့ မျက်နှာလေး..
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ လက်နက် ၃၅ တန် ဘန်ကောက်လေဆ...
မဟာသီရိသုဓမ္မဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း ၂၁ နှစ် ပြည့်...
မဆူပါနဲ့အဖေ..တားတား ရင်တုန်တတ်လို့ ပါ
နိူုင်ငံခြားသားတောင် လေးစားခံရသော မြန်မာပြည်၏ မိခင...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအရေး ဗြိတိန်လှုံ့ဆော်
ကံကို ယုံ ဆူးပုံကို တိုးကြ..ဗေဒင်ယုံ..ဆန်သာကုန်ပေါ...
သခင် အားရ ကျွန်ပါးဝ..
မလေးရှား ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း အတွင်း သေဆုံးမှုများ ဆ...
အသားနူ ပျားတုတ်ခံနေရသော နအဖ..အီးအီးတွင်းထဲတော့ ကျေ...
မင်းတို့အသက်တွေ ဖက်နဲ့ထုတ်ထားဖို့ သာပြင်။။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဆောက်အဦးရှေ့တွင် လူ...
ဘိန်းချက်နေတဲ့အစိုးရ..ဘော်ချက်နေတဲ့ နအဖ..ဆန်မှုန် ...
အောင်ကြည်ရေ..သူ့ ကိုငါကြောက်တယ် မင်းဘဲ ရှေ့ ထွက်မင...
ပူးတွဲကျေညာချက် အမှတ် ၈ (၂၀၀၉)
မောတော့ မောတာပေါ့..ပြောင်က လည်း ပြောင်နေပြီ..
အ၀ှါဘဲ အလုပ်ကောင်းသော နအဖ ဘိုကတော်များ..
ဒိန်းမတ်လုပ်ရှားမူ ပေါ့..ကိုယ့်ညီတွေ တာဝန်ကျေတယ်...
ကျောင်းမတက်ဘဲ day club ထဲရောက်နေကြသူကလေးများ
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးကြပါ၊ ပြီးတော့ လက်ခံကြပါ .......
မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်နေသော '' ဝ '' အဖွဲ့အနေဖြင့် အန...
တောသားမို့တောနေဘဲကြိုက်တယ်..ငါနဲ့အတူ တောမှာဘဲလာ...
သူတို့ ဘဲ အရှက်မရှိ သရက်စေ့တွေ..ပြီးတော့ ကင်းနိုင်...
Facebook အဖွဲ့ဝင်အတွက် ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေးကန်ပိန်း ...
ထောင်သား၏ အမဲသားရှယ်ရာ..ထောင်ပိုင် မယားငယ်အိမ်ရောက...
သာသနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့ ၏ကြေငြာချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်...
ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ...
နအဖဆိုတဲ့ အကြီးအကဲထဲက ဘယ်အကောင် က ဒီလိုပြောရဲသလဲ
နအဖ စစ်တပ် တိုင်းရင်သားများအပေါ် ယုတ်မာ၊ အနိုင်ကျင်...
ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက်တွင် လူ့အခွင့်အရေးများနေ့ အခမ်းအနား ...
နို့ ရည်ခန်းနေတဲ့ မိခင် (ကောင်းကင်ကို)
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ စတိတ်ရှိုးနှင့် ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ ...
ဘုရားသာတ ပေတော့ ဦးပြောင်ကြီး...
Linkလေးတွေကို ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
နအဖ၀န်ကြီးချုပ်ဆိုသူ သိန်းစိန် (ခ) ပြောင်ကြီး ဒိန်...
ဒီဇင်ဘာ.၄ရက် ၂၀၀၉ သတင်း
အပြစ်ရတော့ သောနူတ္တို တစ်ကောင်ထည်း..တကယ်ငွေမျက်နြှာ...
Chrysler ကားကုမ္ပဏီက..ဒေါ်စုနဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားေ...
ကြပ်ကြပ်သတိထား...တရုပ်လုပ် အရုပ်လေယာဉ်ပျံအစုတ်နဲ့ ...
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ရွှေရတုမွေးနေ့ မင်္ဂလာ
ဒီလို တံစိုးလက်ဆောင် ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်မှာ မခံစားနိုင...
အဖွင့်နဲ့ အပိတ်..ဘယ်သူက ဘိတ်ချေးချိတ်ပြီလည်း..
မှော်ဘီ လေတပ် စခန်းမှ တရုတ်လုပ် တိုက်လေယာဉ် လေ့ကျင...
လတ်တလော အဖြစ်ကြောင့် ကုသမှု မှားယွင်းမှုများ ထပ်မံသိ...
ဘယ်လို ဖြစ်သွားမှန်းမသိတဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ နအဖ လက်အော...
လူလိမ်တွေချည်းနဲ့ ဖွဲ့ ထားတဲ့ UDP လိမ်ရသမျှ စားနြေ...
မြန်မာအလံတော် ကြယ်များအား သကြားမင်းက ခိုးယူသွားခြင...
ဗေဒင်မမေးနဲ့ ငွေကုန်တယ်..ပုစ္ဆာမမေးခင်ကတည်းက အဖြေက ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချက်ခြင်း လွတ်ပေးရေးအတွက်တော...
Invitation for Penang Sayardaw Tayarpwe on Decembe...
အမှောင်နယ်ထဲက စိတ်ဓာတ်တွေ (ကဗျာ)